पहिरोको त्रासले निद्रा हराएको छ सरकार ! - BirtaJyoti
पहिरोको त्रासले निद्रा हराएको छ सरकार !
super userAugust 18, 2020 4:41 am 0
रोङ । इलामको रोङ गाउँपालिका-४, प्यूरेका बासिन्दा अनिंदै बसेको कैयौँ रात भयो। बस्तीमुनि भएर बग्ने टिमाइ खोलाकाे त्राससँगै उनीहरु चिन्तामा परेका हुन्। ‘पहिरोले कतिबेला घरै लगिदेला भन्ने चिन्ताका कारण निन्द्रा पर्दैन हजुर’, बस्तीका मानिसहरुको एउटै गुुनासाे छ ।
निन्द्रा हराएको याे बस्तीको व्यथा बयान गरिसाध्य छैन। करिब १ सय घरधुरी रहेको प्यूरे गाउँको एकापटिको पुरै भाग पहिरोले लगिसकेको छ। २०७३ सालबाट क्रमशः लड्न सुरु भएको पहिरोका कारण हालसम्म गाउँका करिब ९ घर माटोमा मिलिसकेका छन्। घर नहुँदा धेरैले वर्षौदेखि बस्दै आएको थातथलो छोड्नुपरेकाे छ ।
पहिरोले बस्ती रित्तिने श्रृंखलामा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन। विस्थापित हुने क्रम जारी छ। अहिले पनि ४ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।
गतसालको पहिरोमा घर गुमाएका भीम राईको परिवार अर्काको घरमा शरण लिइरहेको छ। “अहिले म बस्दै गरेको घर चाहिँ अर्काकाे हो। त्यहाँभन्दा अघि मेरो घर यही भीरमा थियो। २०७३ सालमा अप्ठ्यारो परेर यहाँ सरेको हुँ। आजसम्म पनि सरकारले केही नहेर्दा दु:ख लागेको छ। हामी याे देशकाे नागरिक नै हैनाैं कि भन्ने लागेको छ”, राईले पीडा पाेखे।
अन्य सम्बन्धित समाचार: धरानकाे अस्पतालमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
प्यूरेमा बाँकी रहेका जग्गाजमिन धस्किएका छन्। पानी पर्न थालेसगै बस्तीमा त्रास छाँउछ। यसै वर्ष मात्रै ५ परिवार घरबारविहीन भए।
खोलाले बर्सेनि विस्थापित गरेका नदी किनाराका सबै मानिस झापा झरिसकेका छन्। उनीहरु अहिले पनि जोखिम मोलेर नै बसेका छन्।
बस्तीको फेद भएर बग्ने टिमाइ खोला गाउँलेका लागि वैरी बनेको छ। वर्षासँगैको उर्लँदो खोलाले धेरैको उठिबास लगाएको छ। बस्तीकै टेक बहादुर मगर आफ्नो पनि त्यही अवस्था आउने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। ‘यसभन्दा अघि त्यति उग्र थिएन हजुर! यही सत्तहतर सालभित्र भने धेरै नै उग्र भाे। केही हुँदैन होला भनेर बसेका थियौं, बस्ती नै मिलेर खाँबाेमा रहेको टिन झिक्न समेत सकिएन, सबै बगायो’, पहिरोले घर लगेकोमा मगरले विलौना गरे।
अन्य सम्बन्धित समाचार: उद्धार उडान स्थगित गरिँदा ८० हजार नेपाली विदेशमा अलपत्र
पीडितलाई रोङ गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको भने पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिँदैन। दिन प्रतिदिन बस्तीमा घरहरु एकपछि अर्को माटोमा मिलिरहँदा समेत रोकथाम गर्न नसक्ने जन प्रतिनिधिसँग गाउँलेको ठूलै गुनासाे छ।
यता चुरे क्षेत्रमा पर्ने यो पहिरोको दीर्घकालीन समाधान र रोकथामका लागि पटक पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग लिखित आग्रह गरे पनि सुनुवाई नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष शमसेर राईको भनाइ छ।
super user- November 4, 2020
बिर्तामोड । स्थापनाको छोटो अवधिमै स्थापित सहकारी संस्थाको रुपमा परिचित हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिले आफ्नो साधारणसभाको तयारी थालेको छ । यसैक्रममा ... Read More
भ्रष्टाचार, दलाली र अबैध धन्दाको बिरुद्धमा खुलेर लाग्ने पत्रकारहरु माथिको आक्रमण बन्द गर-तीर्थ सिग्देल
super user- December 1, 2020
झापा । रिपोर्टिङको लागि मालपोत कार्यालय दमक पुगेका माउन्टेन टिभी झापाका सम्वाददाता खगेन्द्र घिमिरे माथी हातपात भएको छ । मालपोत कार्यालयमा दमकमा मंगलवार ४ बजे ... Read More
NEWER POSTहोटल हिकोला हेरिटेजको वार्षिकोत्सवको हार्दिक शुभकामना
OLDER POSTसहारा नेपालको खामबन्दी दरभाउ आब्हन सम्बन्धी सूचना
सुरुङ्गाका अपाङ्ग बालबालिकाले यसरी मनाए मकर संक्रान्ति
दमकमा प्रमाणपत्र छ,डाक्टर छैनन् – बिर्तामोडमा डाक्टर छन्, प्रमाणपत्र छैन्